Ka-hortagga Kaamerada Cayruus ee Kahortagga Coronavirus ee AŞTİ | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKa-hortagga Kaamerada Cayruus ee Kahortagga Coronavirus ee AŞTİ
23 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Kaameradda 'Thermal Camera Onron' oo ka dhan ah Fayraska Coronal ee ASTI
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa talaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka Coronavirus. Xaaladda guud, kaamirooyinka kuleylka ayaa lagu rakibay irida laga soo galo iyo bixida si looga ilaaliyo caafimaadka dadweynaha AŞTİ, oo ah halka ugu badan ee kumanaan rakaab ah maalin walba. Galitaanka iyo kasoo bixista Shirkadda Ankara Intercity Bus Company waxay bilaabatay in lagu bixiyo 2 albaab kaliya, halka hoos udhaca rakaabka iyo dhibcayaasha 4 dhibcood sidoo kale la joojiyay. Madaxa waaxda booliska ee dawlada hoose Mustafa Koç ayaa sheegay in dadka leh halista faafa si dhaqso leh loo ogaandoono kaamirooyinka kuleylka ee cabbira masaafo dheer.
Sii wadida dagaalka wax ku oolka ah ee lagula dagaallamayo faafitaanka cudurka coronavirus ee guud ahaan caasimada, Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa inay qaado tillaabooyin cusub goobaha ay muwaadiniintu ku urursan yihiin
Dawlada hoose ee magaaladu waxay ugu dambeyntii u rogtay dalabka sawirka kuleylka ee AŞTİ, halkaasoo kumanaan rakaab ah ay maalin walba safraan.
TABABARKA CAAFIMAADKA DADKA
AŞTİ, 2 kaamirooyin ayaa la dhigay barxada laga soo galo iyo bixida, halka albaabada kale la xiray. Iridda iyo bixitaannada waxaa lagu bixiyaa laba albaab oo keliya, halka hoos u dhigga rakaabka iyo dhibcaha rakaabka ee 4 dhibcood la baajiyo.
Dawladda Hoose ee Magaalada, oo fulisay tallaabooyinka mudnaanta koowaad siinaya caafimaadka guud mid ahaan, ayaa isla markiiba ku ogaan doona muwaadiniinta heerkulkoodu yahay 38 digrii iyo wixii ka sareeya iyadoo ka mahadcelineysa kaamirooyinka kuleylka ah ee ay ku rakibtay AŞTİ waxaana loo diri doonaa isbitaalka oo ay wehli doonaan ambalaas, kooxda caafimaadka iyo booliiska.
XAALADAHA CAMERA EE Waqtiga A INTİ
Sii wadida howlaha nadaafadda iyo jeermiska joogtada ah ee qayb kasta oo ka mid ah caasimadda iyo gaar ahaan meelaha caamka ah, Dowlada hoose ee Magaalooyinka waxay digniin u dirtaa iyagoo u qaybinaya waraaqo ku saabsan cudurka 'coronavirus' ee muwaadiniinta yimaada AŞTİ.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in dhammaan rakaabka, gaar ahaan kuwa gala iyo ka baxa barta baska ee wata kaamirooyinka kuleylka ah, ay si dhakhso ah u ogaan doonaan inay qandho qabaan xaalad khatar kasta leh, Taliyaha Qaybta Bilayska Mustafa Koç ayaa la wadaagay macluumaadka soo socda ee ku saabsan dalabka cusub:
“AŞTİ waa mid ka mid xarumaha ugu waaweyn ee aqbala rakaabka taga Ankara. Sidaa daraadeed, waxaan qaadnay talaabooyin badan oo dheeri ah si aan u hubinno in muwaadin qaba cudurka caasimada uusan u qaadin cudurka gobolada kale ama kuwa ka yimid banaanka Ankara aysan keenin viruska magaaladeena. Bilowgii kuwan, waxaan ka saarnay joogsiyada dhexe amarkii Madaxweynahayaga Mudane Mansur Yavas. Waxaan ka gaarnaa meesha laga soo galo iyo ka bixista dhammaan Ankara anaga oo wata gaadiidka waddooyinka hal xarun. Waxaan muwaadiniinteena soo-galeynaa u ku xakameyneynaa cabbirka dabka leh nidaamka amniga kaamerada kuleylka. Waxaan u tilmaameynaa muwaadiniinta, oo qandhadoodu ka hooseyso 38 digrii, baska anigoon laheyn wax howgal ah ama rakaab soo gala magaalada. Haddii qandhu kacsan tahay, isla markiiba waxaan xidhnaa weji dabool oo waxaan ku wargalinaa ambalaaska iyo kooxaha caafimaadka ee dibedda jooga. Asxaabteena booliiska asxaabta ayaa waliba kormeeraya muwaadiniinteenna. Kooxaha caafimaadku waxay u qaadaan muwaadinka cusbitaalka loo qoondeeyay. Xiritaanka dhammaan albaabbada laga soo galo iyo bixitaanka, waxaan ku siinnaa gelitaanka iyo bixitaanka AŞTİ kaliya albaabka laga sameeyo kontoroolka kaameeraha kuleylka. Nidaamka cusub ee aan dejin doono maanta oo isniin ah, waxaan soo qaadaneynaa rakaabkii ka imaan jiray albaab gooni ah. Waxyaabaha ka-hortaga jeermis-ka-shaqeynta ee ay fuliso Degmadeena Waaweyni tan iyo maalintii ugu horreysey waxaa si isdaba joog ah loogu fuliyaa koox gaar ah oo loo sameeyay AŞTİ. Waxaan sidoo kale wadnaa talaabooyinkeena si aan uga hortagno infekshanka oo looga gudbi karo sagxadaha. ”
ISKU XIDHIIDHKA DIIWAAN GALINTA DHALINYARADA IYO RIIX
Marka laga soo tago tillaabooyinka laga qaaday Shirkadda Ankara Intercity Bus Company ee ka hortagaysa cudurka coronavirus ee adduunka ku faafa, Degmooyinka Magaalo-Weyne ayaa sidoo kale baajisay "Qodobbada Kala-Soocidda iyo Dusha ka Kallifa" ee 4 gobol oo kala duwan ujeeddooyin taxaddar.
Ilaa halista cudur faafa, gudbinta rakaabka iyo rarida waxaa laga fulin doonaa AŞTİ kaliya hal xarun.
Cabbiraad ka soo horjeeda dhulgariirada wadada Ringat Ring
Wire Mesh Iska Dhagax Dhicin
Raajooyinka Raajo ee ka dhanka ah FETÖ ee dekadaha Alsancak iyo Aliağa
Ka Hortagga X-Ray ee Ka Hortagga Argaggixisada ee Gaadiidka Iiraan
Cabbiraad ka soo horjeeda ciridka on Osmaniye Koonfurta Ring Road
Tallaabadan ayaa la qaadi doonaa
Tallaabooyin ayaa laga Qaadaa Fayraska Corona ee Magaalooyinka Magaalada Mersin
Kahortaga Coronavirus ..! Muddada Safarka Aan La Xiriir Laheyn Wuxuu Ka Bilaabay BursaRay
Codsiga kamaradaha kuleylka ah ee Aştide
Shirkadda Ankara Intercity Bus Company
Tallaabooyin cusub oo loogu talagalay imaatinka Coronavirus ee Ankara